MAXIMA Heavy Duty Platform Lift dia manana rafitra hafahafa fananganana hydraulic mitsivalana sy fitaovana fanaraha-maso avo lenta mba hiantohana ny fampifangaroana tanteraka ny varingarin-drivotra sy ny fisondrotana malefaka miakatra sy midina. Ny Platform Lift dia azo ampiharina amin'ny fanangonana, fikojakojana, fanamboarana, fanovana menaka ary fanasana fiara varotra samy hafa (fiara fitateram-bahoaka, fiaran'ny mpandeha ary kamio afovoany na mavesatra).
Rafitra fanaraha-maso afovoany mahaleo tena: ny tahony iray dia afaka mampiakatra sy midina sehatra, misintona tilikambo, ary manainga fanindroany. Mora miasa sy mahomby izy io.
Ny plateforme dia afaka manangana ambony sy midina miakatra ary miakatra amin'ny haavony voafaritra tsara. Amin'ny toerana ambany indrindra dia mora ny mametraka na midina tilikambo, izay azon'ny olona iray atao.
Ny platform dia afaka miakatra ambony sy midina miakatra ary miakatra ihany koa, izay miantoka ny karazan'ireo fiara tsy mataho-dalàna hidina sy hivoaka amin'ny lampihazo tsy misy mpamonjy. Haavo miasa isan-karazany (375 ~ 1020mm) dia mety amin'ny mpandraharaha isan-karazany.
Ny plateforme dia afaka manao fiakarana mitongilana, izay miantoka ny karazan'entana lozam-pifamoivoizana miakatra sy miala amin'ny lampihazo tsy misy mpamonjy.
Transformer avo lenta dia miantoka ny welding azo antoka.
Fanilo sy kojakoja fampiasa multifunctional manarona toe-javatra isan-karazany.
Mora ny manova ny asany.
Mety hanamboarana takelaka manify samy hafa.
Ny fampidirana ny welding mivantana sy ny fanitarana tokana
Ny valin'ny welding dia mitantana tranga isan-karazany
Ny fanamafisana ny rivotra azo antoka dia miantoka famonoana maharitra
Ny famolavolana mahaolona dia miantoka fiasa azo antoka sy fahombiazana avo lenta
Manamora ny fandidiana ny tontonana fanaraha-maso manan-tsaina
Ireo kojakoja fanamboarana vy vita amin'ny vy feno dia manampy amin'ny fanamboarana mora foana ny tontonana ivelany.
MAXIMA Gas Welding Welding Machine BM200
Basy welding telo miaraka amina kibay telo no mampiasa tsara sy mahomby kokoa.
Ny herinaratra dia afaka manitsy araka izay itiavany azy.
3 PH rectifier dia manamarina ny arc azo antoka.
PWM dia manome antoka ny famahanana hazo maharitra.
Ny fihinanan-tsakafo dia mifangaro amin'ny milina fantsom-bozaka.
Ny fiarovana ny hafanana tafahoatra dia manome antoka fa azo antoka welding.
Teknolojia Invert kilasy eran-tany sy DSP niomerika tanteraka no noraisina
Ny paramères welding dia hapetraka ho azy aorian'ny fanitsiana ireo masontsivana iray ihany
Fomba fiasa roa: efijery sy bokotra fikitika
Fanaraha-maso loop mihidy mba hiantohana ny fiorenan'ny halavan'ny lasitra sy ny tanjaka avo lenta ary hialana amin'ny fiovana
Masinina fanamafisam-batana B80 Aluminium
Azo ampiharina amin'ny fitaovana auto-body, anisan'izany ny aliminioma, firaka aliminioma, vy, varahina.
Ny teknolojia invert dia miantoka ny fahombiazan'ny avo, ny tahan'ny tsy mitombina ary ambany
Transformer avo lenta dia manome antoka fa azo antoka welding
Fitaovana basy sy kojakoja marobe mba handrakofana ny lavaka.
Mora ny manova ny asany
Mety amin'ny fanamboarana karazana déformation manify.
Rafitra manintona dent
Amin'ny fanazaran-tena amin'ny fanamboarana vatana, ny takelaka akorandriaka mahery vaika toy ny vavahady fiarakodia dia tsy mora ny manamboatra azy amin'ny fisintomana nify mahazatra. Ny dabilio fiara na masinina vita amin'ny vy miaro anao dia mety hanimba ny vatana.
Rafitra fandrefesana herinaratra mandeha ho azy
MAXIMA EMS III, ny rafitra fandrefesana sarobidy eran'izao tontolo izao, dia mifototra amin'ny haitao vaovao sy fitaovana ary rindrambaiko. Miaraka amin'ny database fiara an-tserasera manokana (mandrakotra maodely mihoatra ny 15000) dia mahomby sy mora ampiasaina izy io.